Ankazobe: tratra ireo jiolahy mpanakan-dalana amin’ny vatobe | NewsMada
Nidoboka am-ponja ao amin’ny fonjan’Ankazobe, ny alatsinainy teo ireo jiolahy miisa dimy tratra teo am-piomanana nanangona vatobe hanaovana sakana eo amin’ny RN 4 PK 104 Ankazobe tamin’ny 10 ora alina…
Noraisim-potsiny! Saron’ny zandary ireo dimy lahy malaza ratsy amin’ny fanakanan-dalana eny amin’ny lalam-pirenena mihazo an’i Mahajanga. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary, avy namaky trano tao an-tampon-tanànan’Ankazobe ireo jiolahy ka namonjy teo amin’ny RN 4 indray mba hanakana sy hanafika izay fiara mandalo eo. Nifanehatra tamin’ireo zandary mpanao fisafoaka isan-kalina any an-toerana anefa ireo jiolahy tamin’io fotoana io ka nosamborina avy hatrany. Mbola tsy ampy taona ny iray amin’ireo jiolahy, raha ny tatitra nampitain’ny zandary any an-toerana.
Nahatrarana vola 5 hetsy Ar tany amin’izy ireo nandritra ny fisafoana nataon’ny zandary. Nilaza ry zalahy fa vola avy nangalariny tao amin’ilay trano notafihin’izy ireo tao an-tampon-tanànan’Ankazobe io vola io. Nahitana antsy sy fanalahidy maromaro fampiasan’izy ireo rehefa hamaky trano tany amin’ireo jiolahy. Niaiky ny heloka vitany ireo jiolahy nandritra ny famotoran’ny zandary.
Nohamafisin’ny zandary hatrany fa ankoatra ireo manaraka fiara maro eny amin’ny RN 4, misy ihany koa ireo zandary misafo ny tanàna sy ny lalana hisorohana ny asan-jiolahy. Ho tsaratsara kokoa hatrany ny vokany raha misy ny fifanomezan-tanana avy amin’ny tsirairay dia ny fanomezam-baovao mialoha raha misy tranga hafahafa, araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny zandarimariam-pirenena.